डाक्टर रोबिन श्रेष्ठ भन्छन्, हाडजोर्नी तथा नशा रोग सम्बन्धि सबै उपचार यहिँ सम्भव छ - टाकुरा न्युज
Home विविध अन्तर्वार्ता
डाक्टर रोबिन श्रेष्ठ भन्छन्, हाडजोर्नी तथा नशा रोग सम्बन्धि सबै उपचार यहिँ सम्भव छ
इटहरी : सुनसरीको इटहरीमा रहेको बेदान्त हस्पिटल लामो समय देखि सन्चालनमा छ । सञ्चालक इन्द्र बहादुर श्रेष्ठले आँफूले इटहरीमा हस्पिटल सञ्चालन गरी यहाँका गरीब तथा निमुखाहरुका लागि न्यून शुल्कमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
उक्त हस्पिटलमा फेमिली फिजिसियन, मुटु तथा प्रेसर रोग, स्त्री तथा प्रसुति रोग, बाल तथा नवजात शिशु रोग, नाक कान तथा घाँटी रोग, जेनेरल सर्जन लगायत का विभिन्न रोगको उपचार गरिदैँ आएको छ । सोही हस्पिटलमा सेवा प्रदान गर्दै आएका बरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोविन श्रेष्ठसंग हार्डजोर्नी तथा नशा रोगका बारेमा टाकुरा न्यूजका लागि मनोज निरौलाले गरेको कुराकानीको केही अंश–
हाडजोर्नी तथा नशा रोगलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्नु आवश्यक छ ?
हाडजोर्नी तथा नशा रोग (अर्थोपेडिक) लाई सामान्य भाषामा हाडजोर्नी तथा नशा रोगसँग सम्बन्धित निदान, उपचार, शल्यक्रिया लगायतलाई बुझ्नु आवश्यक छ । सजिलो हिसाबले भन्नुपर्दा हाडजोर्नी तथा मांशपेसीमा लाग्ने चोटपटकलाई समेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई यति मात्र बुझेर पुग्दैन। पछिलो समय यसमा पनि बिभिन्न बिधाको विकास भएको छ । जसमा ट्रमा, स्पाईन हाडजोर्नीमा लाग्ने क्यान्सर, स्पोर्ट्स ईन्जुरी लगायत अहिले भने बिभिन्न विधाको विकास भइसकेको छ ।
दुर्घटना बाहेक अन्य के कारणले हाडजोर्नीमा समस्या हुने गरेको छ ?
हाडजोर्नी जन्मजात, शरीरमा आवश्यक तत्वको कमी तथा गडबडी, उमेर, बाथ, संक्रमण, दैनिक क्रियाकलापका कारण, हाडजोर्नी तथा मांसपेसीमा लाग्ने क्यान्सर, ट्युमर लगायतका कारण पनि लाग्ने गर्दछ ।
कुन उमेर समुहलाई कस्तो प्रकारको समस्या देखिन्छ ?
यो रोग युवा पुस्तामा चोटपटक तथा दुर्घटनाको कराणले बढी हुने देखिन्छ । बच्चा र बृद्ध उमेरमा भने रोगसंग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी र संक्रमणका कारणले समस्या बढी हुने देखिन्छ ।
कस्ता रोगका बिरामी बढी आउने गर्दछन् ?
बढी रुपमा ढाड दुख्ने र घुँडाका समस्या लिएर आउने बढी देखिन्छन् । ट्रमा सेन्टर हुनुले चोटपटकका बिरामी बढी आउने गरेका छन् ।
यसको उपचार पद्दति र प्रविधि कस्तो छ नि ?
यो बेदान्त हस्पिटलमा भन्नुपर्दा जस्तै शरीरमा गाँठा गूँठी, मुसा वा खिल भएको छ्ड्क्रे बिजेको, हात वा खुट्टा भाँचिएको, हात वा खुट्टामा सिन्का बिजेको र मासु पलाको, हड्डीलाई ठाउँमा ल्याउने समस्या, घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण गर्न सक्ने सम्मको प्रविधि र जनशक्ति रहेको छ । ढाडमा स्पाईनल कर्डमा समस्या नदेखिएको खण्डमा ढाड बाङ्गिने, कुप्रिने समस्या पूर्ण रुपमा निको पार्ने उपचार पद्दति हामीसँग छ ।
सबैभन्दा सुरुमा त आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिएकोमा टाकुरा न्यूजलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । स्वास्थ्य नै ठूलो सम्पत्ती हो । आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गरियो भनेमात्र हामी अन्य कुराहरुमा सकृय रहन सक्छौं । त्यसैले रोग लागेको अथवा शंका लागेको खण्डमा तुरुन्त अस्पताल जानका लागि आग्रह गर्दछु ।
महामारीबाट बच्न सरकार र नागरिक सचेत रहन आवश्यक छ
इटहरी क्षेत्रमा ०७४ श्रावणमा आएको वाढी पछिको स्वास्थ्य व्यवस्थापन, गत वर्षको डेंगु महामारीलाई सफल व्यवस्थापन तथा हाल कोभिड १९ संक्रमणको...
युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र ब्यवसायमा जोड्न जरुरी छ : याख्खा
पार्टीमा काम गर्ने पदले भन्दा पनि दृढता र इच्छा शक्तिले हो